Ingabe le yi-iPad Pro 2 entsha? | Izindaba zamagajethi
Ingabe le yi-iPad Pro 2 entsha?
Sesifikile ekupheleni kwale nyanga kaJulayi futhi amahemuhemu ngamadivayisi we-Apple awayeki ukufinyelela kunethiwekhi. Yebo, into ejwayelekile ukuthi imodeli elandelayo ye-iPhone ithatha konke ukugqama njengoba kulindeleke ukuthi ifike kulo Septhemba (kukhona nokukhulunywa ngokwethulwa kukaSepthemba 16) kepha kukhona namanye amahlebezi akhomba kubafana uCupertino azokwethula noma khombisa kuleyo nkulumo eyisihluthulelo iMacBook Pro entsha enesikrini se-OLED, i-Apple Watch yesizukulwane sesibili okungenzeka futhi manje kuthiwa inguqulo yesibili ye-iPad Pro izosondela, I-2-intshi iPad Pro 12,9.
Empeleni isithombe esihlungiwe (ongasibona kunhlokweni wale ndatshana) asithokoziswa uma sibhekene nenguqulo entsha yemodeli engu-12,9-intshi futhi ayicaciswanga ngokusobala noma, kepha kusobala ukuthi kungaba enkulu kunazo zonke inguqulo ye-iPad ngoba imodeli engu-9,7-intshi isha kakhulu. Ngaphezu kwalokho, imodeli ekhonjiswe ezithombeni inenombolo MH1C2CD / F, imodeli engakhonjwanga njengamanje kunoma yimaphi amadivayisi anesiginesha yeCupertino ngakho mhlawumbe inguqulo elandelayo ye-12,9-inch iPad Pro.
Empeleni, le iPad entsha ibizongena ochungechungeni lokukhiqiza njengamanje, sicabanga ngokuthuthuka okuhambisanayo ngokwezinto zangaphakathi, ngoba ngaphandle awukwazi ukubona okuningi kulokhu kubanjwa futhi asikholelwa ukuthi idizayini izoshintsha. Ngamafuphi, sikhuluma nge-iPad Pro engeke yethulwe kuze kube nguSepthemba odlule, kodwa usuku lwayo alwaziwa ngokuphelele nokuningi esimweni sokuvuselelwa okungekukhulu kakhulu okungaholela ekwethulweni ngokushesha kunokuba singacabanga. Sizolandela eduze amahemuhemu nokuvuza okufinyelela kwinethiwekhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Ingabe le yi-iPad Pro 2 entsha?
Isithombe seBlackberry Neon sishicilelwe, i-terminal elandelayo yeBalckberry ene-Android
Ukubuka ama-movie e-3D ebhayisikobho ngaphandle kwezingilazi kungenzeka ngenxa ye-MIT